Ukubhuloga akwanele, “Cindezela Inyama”! | Martech Zone
ULwesibili, May 27, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Lesi yisisho engikhathele ngaso - ngokushesha - phakathi nalokhu kukhethwa kukamongameli. Angiqiniseki ukuthi ngubani owabhala igama langempela kodwa ngibonile ukuthi lisetshenziswe kabanzi kule sizini. Muva nje, umbusi waseWest Virginia wasebenzisa leli gama ukudingida ukuthi kungani uBarack Obama alahlekelwe yiWest Virginia ekuqothulweni komhlaba nguHillary Clinton. Uzama ukuvikela umbono ophikisayo wokuthi iWest Virginia isenezinkinga zomjaho futhi u-Obama wayilahla ngoba engachazanga isikhathi esanele inyama ecindezelayo, aka exhawula.
Kufanele kube nentshisekelo kubakhangisi ukubona ukuthi kunamthelela muni lokho inyama ecindezelayo unalo ngempela okhethweni. Imikhankaso ifana nemikhankaso yamasu wokumaketha e-database kuma-methamphetamines. Zonke izinhlangothi ziletha ubuhlakani bezibalo, zisebenzisa ukumaketha okufika ngesikhathi futhi okuhlosiwe ngezindlela ezahlukahlukene, futhi zisebenze kanzima cindezela inyama. Abathengisi kufanele bazi, ngaphandle kokungcola kwezepolitiki, ukuthi la maqhinga ayasebenza.
Okufanele sincike emkhankasweni ka-Obama
Abaningi bethu bayakhohlwa ukuthi uHillary waphathwa njengoMuntu Oqokelwe Ukungenela uMongameli ngonyaka ka-2008 kanti uBarack Obama wayesohlwini olufushane kakhulu lwabangenalwazi 'phezulu nabafika' kwiDemocratic Party. Imizamo yakhe yokumaketha ngokunembile ithele izithelo, noma kunjalo. Ukubheka okukodwa kusayithi lika-Obama futhi uzothola umlayezo wazo zonke izinhloso:
Lapha e-Indianapolis, ngithole i-imeyili enegciwane lapho benginganikela khona, egameni lomunye umuntu, kulo mkhankaso. Umkhankaso ka-Obama uvule (futhi wabe esevala) ihhovisi 1 block eningizimu yeSekele lapha e-Indy - prime estate real to cindezela inyama. Ngithole ne-imeyili eqondile evela emkhankasweni ka-Obama. Uma ubheka imicimbi uzothola ukuthi u-Obama ngumshini wokuxhawulana ngesandla, futhi ngaphezulu Imicimbi ye-16,000 kuze kube manje futhi kusele ithani.
Angikholwa ukuthi u-Obama ulahlekelwe yiWest Virginia ngoba akazange axhawule ngokwanele. Ngijwayele ukuvuma ukuthi ulahlekelwe ngenxa yokuthi eyakhe umyalezo awuhlalanga kahle ku-Appalachia.
Angikhuthazi uBarack Obama ukuba abe nguMongameli, ngimane ngibone umshini wokumaketha omangalisayo owenziwe. Konke okwenziwa yiqembu lakhe kulungile - futhi kubalulekile ukuqaphela ukuthi abaphuthwa yithuba lokwenza lokho ngokucindezela inyama.
Ukucindezela Inyama kuyangisebenzela
Ngibe nempumelelo ngokulingene ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi lapha e-Indianapolis. Kuyathakazelisa ukuthi kuningi Ama-blogger e-Indianapolis umthunzi wakhe engiwele ngaphansi kwakhe ngokombono wezibalo ze-Intanethi. Ezingeni lesifunda, noma kunjalo, ngikholelwa ukuthi nginegama eliningi (nobuso) abantu abalikhumbulayo.
Ngikweleta impumelelo yami yasendaweni ukuze ngokucindezela inyama. Umsebenzi wami nge Encane i-Indiana, Umzila we-Indy Cultural, IKomidi leSuperbowl lika-2012 nokusebenzisa wonke amathuba ukufundisa osomabhizinisi bendawo ngeSocial Media kube nomthelela omkhulu kakhulu kunebhulogi yami engake yaba nayo. Leli yiphilisi elinzima ukugwinya onikezwa ngaso sonke isikhathi engisifaka kubhulogi yami kepha kubalulekile ukuthi abantu babone ukuthi ukubhuloga kumane kunganele!
Phuma futhi cindezela inyama! Ukubhuloga kukuhlinzeka ngokusobala nokwethembeka isayithi lezincwajana lokumaketha elingeke likunikeze - kepha noma kunjalo alinikezi umuzwa wokubuka umuntu emehlweni nokumxhawula.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ngizoba nebhulogi enkulu kakhulu enokuchayeka okukhulu kukazwelonke uma ngikwazi ukuyenza emicimbini kazwelonke. Lokho kuhlale kunzima ngomsebenzi wesikhathi esigcwele, kepha ngisenethemba lokufika kwabambalwa kulo nyaka.
Tags: 2008UkhethomathuphaimihlanganoObamaezombusazwecindezela inyamaUkunika Amandla Ukuthengisa
May 28, 2008 ku-8: 06 AM
Umbono omuhle, olinganiselayo, uDoug. Ibhulogi yakho ikhumbule indatshana engiyifunde kuleli sonto eledlule echaza omunye wabaphathi bomkhankaso kaSenator Clinton abancoma kusenesikhathi ukukhulisa u- $ 100 umuntu ngamunye kwabesifazane baseMelika abangu-1,000,000 XNUMX XNUMX.
Yeka isikhalazo se-blockbuster! Kepha lesi siphakamiso sichithwe ngomunye umeluleki womkhankaso. (Futhi siyazi ukuthi imuphi umuntu ozobhapathizwa osebenzisa ngempumelelo ukuqoqwa kwemali okuncane: Obama.)
On "ukucindezela inyama" vs amasu we-inthanethi: Ngicabanga ukuthi ngamunye uthela izinzuzo ezahlukahlukene. Amanye amakhasimende (noma abavoti) azothintwa kuphela ukufinyelela kubantu. Ezinye ongeke uze uxhumane nazo ngaphandle kokuthi ube ne-inthanethi. Imiphumela yokukhulisa ithatha yomibili.
(Noma, njengoba umngane wakudala wayevame ukusho lapho enikezwa u-ayisikhilimu we-vanilla noma ushokoledi: “Yebo!”)
May 28, 2008 ku-5: 29 PM
UDoug: Ngiyavuma ngokuphelele. Ngifeze ukunconywa okuningi lapha e-Atlanta nge I-Atlanta Web Osomabhizinisi namanye ama-meetups ahlobene nemicimbi engiya kuyo futhi ngiyayisekela kunalokho engake ngakwazi ukukuthola ibhulogi yami. Futhi, kuzuzisa kakhulu ukuba nabantu ubuso nobuso kunokuba wedwa ngemuva kwekhibhodi nesikrini sekhompyutha.
May 29, 2008 ku-9: 30 PM
Yebo, thina eTruffle Media siyaqhubeka nokuba khona emicimbini (I-World Pork Expo isonto elizayo kulabo abanentshisekelo :) futhi sisebenzisa ifoni ejwayelekile ne-imeyili ukuthinta izisekelo.
Siphinde sisebenzise iziteshi ezintsha zabezindaba ukugcina sixhumene nalabo abathanda ezolimo:http://twitter.com/trufflemedia), iSwineCast.com (kanye nezindawo zodadewabo benkomo, ubisi, izinkukhu, nezitshalo) amabhulogi / ama-podcast, iFlickrhttp://www.flickr.com/photos/trufflemedia/), neBlip.tv (http://trufflemedia.blip.tv/).
Kepha akukho okufana nokuba khona mathupha ukuze uzwe ukuthi yini abantu abanentshisekelo kuyo, uxoxe uphethe ubhiya ngesandla, futhi ubone umehluko / ulimi lomzimba kwezinye zezihloko ezibucayi (ummbila wokudla noma ummbila kaphethiloli ingxoxo edumile Iowa :)
Ngiyabonga futhi uDoug.
Jun 7, 2008 ku-11: 20 PM
Ngemuva kokuhamba amamayela ayi-10,000 2 ezweni lonke ku-Blog Tour yethu, ngiyakholelwa ngokuqinile emandleni okuxhumana nabantu e-FXNUMXF. Ukuhleka kuyigugu uma kuqhathaniswa ne-lol.
Jun 11, 2008 ku-3: 53 PM
UDoug - Ukuthumela okuhle, ndoda yami. Ngithola ukuxhawulana okuhle nokumamatheka kube nomthelela omkhulu ekuthengiseni, ekuxhumaneni nabantu nasekwakhiweni kobudlelwano kunanoma yini enye engingayenza.
Muva nje ngizithole sengishintsha umsebenzi, sengibe ngowesibili kuphela selokhu ngangena kwezentuthuko ebhizinisini ngokugcwele. Ekuxoxisaneni nabo bonke bangibuze, "Wenzani ukwakha imikhondo / ibhizinisi?" Ngaphandle kokungabaza, inethiwekhi yami ingumthombo omkhulu kunayo yonke wokuhola njengoba ngithola ukuhanjiswa kubo. Lokhu kungenziwa kuphela ngokuletha ukuxhumana nokuxhumana okungafani nabantu. Ngisebenzisa ibinzana elithi "xhawula isandla sakho" kakhulu lapho ngithumela umuntu nge-imeyili. Njengakwi, "Ngibheke phambili ukuxhawula isandla sakho ngelinye ilanga." Angiyena umlandeli we ……… ”ocindezela inyama”. Kuzwakala kungathi… ..fleshy.